Sony IMX 586: Sony 48 MP igwefoto igwefoto | Gam akporosis
Edere Ferreno | | Sony
Igwefoto bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa na ekwentị. Anyị na-ahụ mgbe niile otu ụdị akara na ihe ọhụrụ, dị ka mbata nke igwefoto azụ atọ. Sony bụ otu n'ime ụlọ ọrụ amaara ama na ngalaba a, na ndị Japan na-ewebata igwe ọhụụ ha. Ọ bụ ihe mmetụta na-apụta maka mkpebi 48 MP ya.
Aha ya bụ Sony IMX 586 ọ na-anọchitekwa ọganihu dị mkpa maka ụlọ ọrụ ahụ. Ebe ọ bụ na n'ime nke anyị na-ahụbeghị nnukwu mgbanwe ma ọ bụ ihe ọhụụ ruo ogologo oge, ụlọ ọrụ ahụ na-eweta azịza ọhụrụ.
Ihe ụlọ ọrụ ahụ mere bụ iji belata oke pikselụ, gbadata 0.8 μm. N'ụzọ dị otú a, na ihe mmetụta na diagonal nke 8 mm, anyị nwere ikike nke 48 MP. Yabụ nke a bụ ọrụ dị mkpa na ụlọ ọrụ Japan.
Sony chere echiche banyere ihe niile, dịka site na mbenata pikselụ nha, enwere ike ịnwe nsogbu na foto na ọnọdụ ọkụ. Yabụ, ụlọ ọrụ ahụ na-eji teknụzụ akpọrọ Quad Bayer. Nke a bụ nzacha agba nke ga-eji ozi sitere na pikselụ anọ n'otu oge. Yabụ, a ga -emepụta ihe oyiyi 12 Mpx na pikselụ 1.6 μm.
N'ihe ndekọ, ihe mmetụta Sony a enwere ike imeghari ya na mkpebi di iche iche. Ya mere, ndị ọrụ ga-enwe ike ịdekọ na 4K (4096 × 2160) na 90 fps; 1080p na 240fps ma ọ bụ 720p na 480fps. Ya mere, ọ na-ekwe nkwa inye ndị ọrụ na-aga ịdekọ vidiyo ole na ole nhọrọ.
Ọnụahịa nke ihe mmetụta Sony a Ọ ga - abụ 3.000 yen, gụnyere gụnyere ụtụ isi, ihe dị ka euro 23 ịgbanwe. A ga-ewepụta ya na ngwụcha Septemba. Yabụ anyị nwere ike ihu tupu afọ agwụ ekwentị na-eji ya, ma n'ezie na 2019 anyị ga-ahụ ya nke ukwuu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Sony » Sony IMX 586: Ihe ngosi Sony MP 48 ọhụrụ